«Kidnapping» – Arman Kamis: tafakatra 4 ireo voasambotra, polisy sy miaramila ny roa | NewsMada
«Kidnapping» – Arman Kamis: tafakatra 4 ireo voasambotra, polisy sy miaramila ny roa
Tsy nifarana ny alatsinainy teo fa nitohy, omaly, ny fikarohana sy fanenjehana ireo jiolahy mpanao kidnapping, naka an-keriny ilay teratany karana, tale jeneralin’ny TransFy, i Arman Kamis, tao Toamasina. Tafakatra efatra izao ireo voasambotra ka miaramila sy polisy ny roa.
Mivoatra hatrany ilay “raharaha Arman Kamis”. Fantatra izao, araka ny loharanom-baovao marim-pototra fa niakatra efatra ny isan’ireo jiolahy voasambotra tamin’ity fakana an-keriny an’i Arman Kamis ity. Nahitana polisy iray sy miaramila iray samy miasa ao Toamasina amin’ireo jiolahy voasambotra ireo, raha ny tatitra voaray hatrany. Ankoatra ireo olona voasambotra ireo, tratra tao amin’ny trano nitazonana ilay Karana koa ny basy Kalachnikov iray sy bala miisa 120, boîte à chargeur efatra, moto Jog iray, fiara ford iray fampiasan’ireo jiolahy, fandriana miaraka amin’ny sakafon’ilay Karana. Nohamafisin’ny zandary fa taorian’ny fikaroham-baovao andro aman’alina nataon’izy ireo tao Toamasina dia votsotra afakomaly hariva tamin’ny 4 ora sy 30 mn ilay Karana tompon’ny TransFy. Zandary maromaro, notarihin’ny kaomandin’ny kaompanian’i Toamasina sy ireo lefiny no nihazo ny trano iray ao amin’ny fokontany Mangarano Toamasina ka nivonona ny hanao ny fisavana. Nahita izany ireo jiolahy avy ao anatiny ka nofahanany ny basy Kalachnikov (re avy any ivelan’ny trano ny feon’ny basy nofahanana). Niditra avy hatrany sady nitifitra ireo zandary ka natsipin’ilay jiolahy ny basy ary nibaboka izy ary nofehizina avy hatrany. tafaporitsaka avy any ambadika kosa ireo roa lahy namany nihoatra tambohon’olona tao ambadika ary nihoatra tambohon’olon-kafa maromaro hatrany ka dify tany anelakela-trano. Hita tao amin’io trano io ilay Karana ka avotra soa aman-tsara tsy nisy vola naloa.
Nampijalin’ireo jiolahy i Kamis…
Araka ny fitantaran’i Kamis dia nisy ny fampijaliana nataon’ireo jiolahy azy, toy ny daroka sy kapoka. Tsizarizary ny sakafo nomena azy . Nilaza izy fa dimy lahy ireo jiolahy naka an-keriny azy, ny 21 novambra 2018. Notapenana saron-tava ny masony nandritra ny fakana an-keriny azy tamin’io fotoana io. Jiolahy efatra kosa no mpiambina azy tao an-trano miampy vehivavy telo mpikarakara sakafo. Norahonan’ireo jiolahy hotifirina hatrany izy nandritra ny fotoana nitazonana azy tao amin’ilay trano, raha ny fanazavany hatrany.
Andrasana, araka izany, ny tohin’ity raharaha ity satria mbola ifampitadiavana any ireo jiolahy tafaporitsaka. Voalaza fa misy maratra eo amin’ny sandrin’izy ireo nandritra ny fihanihana tamboho misy vakin-tavoahangy. Mangataka fiaraha-miasa amin’izay manana loharanom-baovao momba ireto jiolahy ireto ny zandary.